Vonoan’olona teny Saropody : mpivarotena ny iray amin’ireo olona dimy saron’ny polisy | NewsMada
Vonoan’olona teny Saropody : mpivarotena ny iray amin’ireo olona dimy saron’ny polisy
Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny Commissariat Central Atsimondrano eny Tanjombato, ny zoma 12 mey 2017 teny Saropody ireo olona dimy voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny famonoana ho faty ilay lehilahy manao ny asan’ny mpiambina eny Tanjombato.
Araka ny fanazavan’ny polisy, ny 21 marsa 2017, nampandre ny polisy ny vadin’ilay niharam-boina fa hoe tsy hita ny vadiny. Rehefa nanao ny fikarohana ny fianakaviany, hita teny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly HJRA ny fatin’ilay raim-pianakaviana. Nanao ny angom-baovao rehetra ny polisy ka fantatra fa vono tamin’ny alalan’ny tsindron’antsy teny amin’ny lalamby eny Saropody, ny alin’ny 21 marsa 2017 ny antony nahafaty azy.
Nohamafisin’ny polisy fa firaisana tsikombakomba teo amin’ireo jiolahy mpanendaka sy vehivavy mpivarotena ny nitarika ny fahafatesan’ilay niharam-boina. Fantatra fa nitady mpivarotena ity lehilahy ity tamin’io fotoana io ka vehivavy iray antsoina hoe Natacha no niaraka taminy. Teo am-piomankomanana ny nataony izy ireo, tonga tampoka ireo jiolahy efatra nanindrona antsy azy.
Nolaizain’ireo voarohirohy nandritra ny famotoran’ny polisy fa efa voaomana mialoha ity vonoan’olona ity ka ilay mpivaro-tena sy ny namany iray antsoina hoe Potsy no nanatitra azy teo amin’ny fiantsonan’ny taxi-be 135 ka teo no nisy olona nitondra teny amin’ny HJRA, saingy tsy avotra intsony ny ainy.
Mpiray tsikombakomba amin’ireo jiolahy sy ireo mpivaro-tena amin’ny asa fanendahana ny lehilahy iray mpanao bar eny an-toerana. Manatitra ny anjarany ao amin’io lehilahy io ry zalahy rehefa avy manendaka.